သခင်ချစ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ | ပျူနိုင်ငံ
အတူလြှောကျတဲ့လမျး (၉.၁၂.၂၀၀၄-၉.၁၂.၂၀၁၉ )
သခင်ချစ်ကို အဖ ဦးနွဲ့၊ အမိ ဒေါ်အေးချိုတို့မှ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ပဲခူးတိုင်း
သနပ္ပင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (မွေးဖွားသောရက်စွဲ အတိအကျ မသိရပေ။)
သနပ္ပင်မြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၃၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ စ၍ ကျောင်းဆရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် နဂါးနီ
ဦးထွန်းရွှေနှင့် ဆက်သွယ်၍ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၌ တက်ကြွစွာ စတင်
၁၃၀၀ ရာပြည့် အရေးတော်ပုံ မတိုင်ခင် ကာလအတွင်း ဆရာချစ်သည် တို့ဗမာ
အစည်းအရုံးသို့ ၀င်ရောက်ပြီး သခင်ချစ်ဟူသော အမည်ကို ခံယူခဲ့သည်။
ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ ဦးဆောင်
သော ဗဟိုမြေအောက် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွင် သခင်ထွန်းရွှေ (နဂါးနီဆရာ
ထွန်းရွှေ) နှင့်အတူ စည်းရုံးရေး ဌာန တွင် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ စစ်ပညာသွားရောက် သင်ကြား
မည့်သူများနှင့် မြေအောက်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များအတွက် ရန်ကုန်မြို့
ပုဇွန်တောင် ရေကျော်တွင် သမ၀ါယမ ဈေးဆိုင်ဖွင့်၍ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်
နာခံကာ ရှာဖွေ ကျွေးမွေးခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော
လက်ဝဲ(ကွန်မြူနစ်စနစ် လိုလားသူ)၊ လက်ယာ (ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်
လိုလားသူ) ဒုတိယအဆင့်ရှိသော ခေါင်းဆောင်အားလုံးကို ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြု
ခဲ့သူဖြစ်သည်။ (ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း အောင်ကြီး၊ ရန်ကုန်
ဘဆွေ၊ သခင်တင်မြ၊ ရဲဘော်ဌေး အစရှိသူများ အပါအ၀င်။)
ပြည်တွင်းသို့ လျှို့ဝှက်စွာ ပြန်ဝင်လာသော ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင်များထံ
တွင် ပဲခူးမြို့အနီးရှိ စည်တီးရွာ၌ စစ်ပညာကို အစောဆုံး ပြန်လည်သင်ကြား
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မဆုတ်ခွာခင် အချိန်နှင့် ဂျပန်
စစ်တပ်များ လက်နက်မချခင် အချိန်များအထိ လက်နက်ကိုင် မြေအောက် လျှို့ဝှက်
တိုက်ခိုက်ရေး တာဝန်များကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဂျပန်စစ်တပ်များ စတင်ဝင်ရောက်လာချိန်တွင်
တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ ဌာနချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ သခင်မြ နှင့်အတူ အထွေထွေအတွင်း
ရေးမှူး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ ပါတီ (နောင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ) တွင် အရေးပါသော
ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်စစ်တပ်များ အထက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချီတက်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရေကျော်
တွင် နေထိုင်သော မခင်သန်းညွန့် (ခ) အမာ (ခ) မခင်သန်း (ခ) မချစ်မေနှင့်
၁၉၄၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်ရန် အတွက်
ဖ.တ.ပ.လ (ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်) အဖွဲ့ကို
စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ခေါင်းဆောင် (၉) ဦးအနက် ပြည်သူ့အရေးတော်ပါတီ၏
အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်း(၄)၏ နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ်
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သော ဖ.ဆ.ပ.လ
အဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင် နံပါတ် (၁၀) မြောက် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူ
လွတ်လပ်ရေး မရခင် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့
သိမ်ဖြူ- အမတ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဗ.က.ပ (သခင်သန်းထွန်း ဦးဆောင်သော ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်
ပါတီ) ၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင် တောခိုခဲ့သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ဗ.က.ပ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကို စတင်
၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ သစ္စာခံတပ်ဖွဲ့
များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး ပဲခူးရိုးမ တနေရာတွင် ကျဆုံးခဲ့သည်။
သခင်ချစ်နှင့် ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်သန်းတို့မှ သမီးကြီး မစောနွဲ့(ခ) မအေးငြိမ်း၊
သမီးလတ် မစန်းရီ(ခ) မခင်ညို၊ သားငယ် မောင်ထွန်းရီ(ခ) ဗထူးတို့ကို
သခင်ချစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား
မှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဒုတိယ
ကမ္ဘာစစ် အကြိုကာလများနှင့် ဂျပန်စစ်တပ်များ လက်နက်မချခင် အချိန်များ
အထိ လက်နက်ကိုင် မြေအောက် လျှို့ဝှက် တာဝန်များကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ
ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်
နာမည်ကျော်ခဲ့သူ အများအပြားကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော ဆရာ တစ်ဦး
-စာရေးဆရာ ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ စာအုပ်များ
-သခင်အောင်ကြီး၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မင်္ဂလာဆောင် ဆောင်းပါး
Posted by ကိုအောင် at 02:36
Love your post as I am very much interested in history. Burmese history as well as world history. Nowaday we hardly could get all these kind of information.
28 July 2009 at 04:01
ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင် နာရေးဖတ်ရတော့။ သူ့သမိုင်းအကြောင်း ဖိုရမ်မှာ ပြောကြရင်း။ သခင်ချစ် အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသေးတယ်။ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ အဓိကနေရာတွေက ပါဝင်ခဲ့ပြီး။ သမိုင်းမှာ အဖျောက်ခံထားရသူတွေပေါ့။
28 July 2009 at 05:12
တို့ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်း ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ရှိနေလို့
ကိစ္စ ရှိရင် ပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ် .. မှိန်ဖျောက်ခံထားရတဲံ သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ အကြောင်း အလျင်း သင့်သလို ပြန်လည် ပြောပေးပါ ကိုအောင်ရေ.. သူများမေ့ခိုင်းတိုင်း ကျမတို့ မေ့လို့ မဖြစ်ကြဘူးလေ နော်.. နောင်လာမဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် ကျမတို့မှာ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ် အချိန်တွေပေးပြီး မျှဝေပေးတဲ့ ကိုအောင့်ကို ကျေးဇူး တကယ် တင်မိတယ်
28 July 2009 at 06:07
သခင်ချစ် နာမည်နဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ မသိဘူးနော်။
ကျမသိတဲ့ သခင်ချစ်နဲ့ အခု အတ္ထုပ္ပတ္တိပါတဲ့ သခင်ချစ် မတူဘူး။ ကျမသိတဲ့ သခင်ချစ်က အသက်တော်တော်ကြီးမှ ဆုံးပါးသွားတာ။ ကန်တော်လေးမှာနေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ခုလိုဖော်ပြပေးလို့ ကျမတို့ သိရ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ ကူးယူသွားပါတယ်။
လာဖတ်သွားသဗျ။ သမိုင်းလေးတွေတင်ပေးတာ ကောင်းသဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာ ငယ်ငယ်က ကျောင်းတက်တုန်းက သိပ္ပံအတွဲဘက်က ယူခဲ့လို့ သမိုင်းကို သိပ်မသင်ခဲ့ရဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဗိုလ်ချုပ်တို့လို ထင်ရှားတဲ့သူတွေကလွဲရင် တခြား သမိုင်းဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နာမည်ပဲ ကြားဖူးပြီး အတိအကျ မသိခဲ့ဘူး။ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်လည်တင်ပြပေးတာ သိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
28 July 2009 at 23:43
vigor > ကျေးဇူးပါ၊ အလျဉ်းသင့်သလို တင်ပြပါ့မယ်။
ကိုတင်မင်းထက် > သမိုင်းမှာ အဖျောက်ခံရတဲ့ တခြား
သူတွေ အကြောင်း ကြိုးစားပြီး ရေးသွားပါ့မယ်။
မမသီရိ > ကျေးဇူးတင်တယ် သိရလို့ ကျေးဇူးပါ။
မမေဓါဝီ > မမေဓါဝီသိခဲ့ဖူးတဲ့ သခင်ချစ်ဆိုတာ ညောင်တုန်း- သခင်ချစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ သခင် (ချစ်)
ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းမှာ နှစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူ၊သူမ > ကူးယူလို့ ရပါတယ်၊ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြမယ်
ဆိုရင် စာရေးသူနေရာမှာ ကျနော့်အမည်နဲ့ဖော်ပြ ပေးပါ။ တခြားသူတွေရဲ့ သမိုင်းကို ဆက်လက်ပြီး
ကိုလူသစ် > သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ ဖော်ပြရတာ ကျနော် ၀ါသနာပါ ပါတယ်၊ သို့ပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း
တချို့အချက်အလက်များဟာ မှန်မမှန်ဆိုတာ ဟိုစာအုပ်လှန်ရ ဒီစာအုပ်လှန်ရ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်စဉ်တွေ
ကြည့်ရ တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်၊ ဆက်လက်ပြီး
ကျနော် ကြိုးစားနိုင်သလောက် ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။
မငယ်နိုင် > ကျနော်လည်း ရှစ်တန်းအောင်တော့
သိပ္ပံတွဲဖက်ကပါ၊ တက္ကသိုလ်မှာလည်း သချာင်္ပဲ သင်ခဲ့
ပါတယ်၊ ၀ါသနာအရ စာအုပ်စုလိုက် မှတ်တမ်းမှတ်
လိုက် လုပ်ရင် အခုလို သိခဲ့တာပါ၊ အဆင်ပြေသလို
သမိုင်းမှာ တိမ်မြှပ်ပျောက်ကွယ်ခြင်း ခံရတဲ့ အကြောင်း တွေကို တင်ပြသွားမယ်၊ စာလာဖတ်တာ
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၉)
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၈)
ရံသီ သာသနာပြုအသင်းများ ညီလာခံ(ဥရောပ)နှင့် ရှင်ပြုပ...
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၇)
ကျွန်တော်၏ မှတ်သား သိမ်းဆည်းထားသမျှ
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၆)
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၅)
လီရနာ၊ ဂင်္ဂါ၊ ဧရာဝတီ (၄)
ကန့်ကွက်မည့်သူ ရှိရင် ဖော်ပြလော (၃)
ကန့်ကွက်မည့်သူ ရှိရင် ဖော်ပြလော (၂)
ကန့်ကွက်မည့်သူ ရှိရင် ဖော်ပြလော (၁)